Kedu ka ikuku mmiri si emetụta ihu igwe ụwa? | Network Meteorology
Kedu ka ikuku mmiri si emetụta ihu igwe ụwa?
N'ụbọchị anyị kwa ụbọchị, anyị na-eji ngwaahịa ndị na-eme ka ndụ nwee ntụsara ahụ; otu o sila dị, ụfọdụ n’ime ha na-emerụ ahụ nke ukwuu, ma anyị onwe anyị ma maka gburugburu ebe obibi, dịka ọ dị na aerosol.
Agbanyeghị na ọ nwere ike iju anya, site na ugwu ugwu Iceland nke anyị nwere ike ịmata ka aerosol si emetụta ihu igwe ụwa.
Nke a bụ ugwu na-atọ ụtọ nke ukwuu ịmata ka aerosol si emetụta ya, ebe ọ bụ na n’agbata afọ 1783 na 1784, Laki fissure nke ọkụ ọkụ Holuhraun na-ewepụta sọlfọ dioxide ọnwa asatọ, na-akpata nnukwu kọlụm nke ihe karịrị North Atlantic. Mmiri ndị a na-agba mmiri belata nha nke igwe ojii, ma ha ebulighị mmiri ole dị n’ime ha dị ka otu ndị ọkà mmụta sayensị nke Mahadum Exeter (United Kingdom) duziri.
N'ụzọ dị otú a, ndị nnyocha ahụ kwenyere na nsonaazụ ha, nke ebipụtara na ọmụmụ na akwụkwọ akụkọ ahụ 'Nature' nwere ike belata ejighị n'aka na amụma ihu igwe n'ọdịnihu na-akọwa mmetụta sulfate aerosol nwere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-esi na mgbanwe ihu igwe.
Aerosol ha na-arụ ọrụ dị ka ihe dị n’ime mmiri nke ikuku mmiri dị na mbara igwe na-ekpuchi ịmalite ígwé ojii. Ọ bụ ezie na enwere aerosol nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, enwere ụzọ ndị ọzọ sitere n'okike dị ka ịhapụ sọlfọ dioxide n'ihi mgbawa ugwu mgbawa.
N'oge ngwụcha ikpeazụ nke ugwu mgbawa Holuhraun, nke mere na 2014-2015, ọ na-ebupụta n'etiti 40.000 na 100.000 tọn sọlfọ dioxide kwa ụbọchị n'oge mgbawa ya. Ndị ọkachamara jiri ụdị usoro ihu igwe nke oge a nke jikọtara ya na data enwetara site na NASA Satellites, nwee ike ịchọpụta na oke mmiri mmiri mmiri belatara na nha, na-ebute oke akụkụ nke ìhè anyanwụ gosipụtara na mbara igwe. Ka ọ were, ihu igwe jụrụ oyi.
Yabụ, ndị nyocha ahụ kwenyere na '' ekpuchitere igwe ojii nke ọma '' maka mgbanwe aerosol na ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ka ikuku mmiri si emetụta ihu igwe ụwa?
Mmiri ebili mmiri na-egbu egbu ga-adịkarị